MIDHAHA DIINTA: Maxaa Imaanka Siyaadiya? Maxaa se Naaqusiya? – WARSOOR
Todobaadkan barnaamijkeenna MIDHAHA DIINTA waxa aad kaga bogan doontaan qodob muhiim u ah caqiiqada iyo aaminaadda qofka muslimka ah. Waxaana qodobkaasi yahay; Maxaa Imaanka siyaadiya? Maxaa se naaqusiya? Waxa inoo soo jeedinaya sheekh Maxamed sheekh Cumar Dirir. Waxaana mudaaradan duubtay maktabada Al-fajri oo ku taalla magaalada Hargeysa.